Parami Gas : News
Address Sakura tower, Yangon, Myanmar
Chinese New Year Promotion ( Until 14th February )
a few seconds ago Author: Author's name
Promotion လေး ရှိတာ မနေ့ကွေမှာစိုးလို့ သတိလာပေးတာပါရှငျ 📢.ဘယျအစုံလေးကိုပဲ ယူယူ 8% လြော့စြေးလေး ရှိတာမို့ မိသားစုမြားရငျ 12.5 kg အိုးလေး သုံးပွီး မိသားစုနညျးရငျ5kg အိုးလေးနဲ့ သုံးရတာ အဆငျပွမှောပါရှငျ 😍
Promotion လေး ရှိတာ မေ့နေကြမှာစိုးလို့ သတိလာပေးတာပါရှင် 📢.ဘယ်အစုံလေးကိုပဲ ယူယူ 8% လျော့ဈေးလေး ရှိတာမို့ မိသားစုများရင် 12.5 kg အိုးလေး သုံးပြီး မိသားစုနည်းရင်5kg အိုးလေးနဲ့ သုံးရတာ အဆင်ပြေမှာပါရှင် 😍.
အချိန်မရွေး‌ချက်ပြုတ်တက်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့အတွက် စိတ်ချရပြီး ဘေးကင်းတဲ့အပြင...
2 months ago Author: Parami Gas
စိတ်ချရပြီး ဘေးကင်းတဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းကာလာ လှပတဲ့ ပါရမီဂက်စ်အိုးလေးက မီးဖိုချောင်မှာ နေရာယူဖို့ အသင့်ပါပဲနော်
Diet လုပ်နေတဲ့ လူကြီးမင်းတို့ကလဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို မျိုးစုံ ကြိုးခုန်ပြီး ချက်ပြုတ်လို့ ရသလို
ပိတျရကျတှမှော မိသားစုကို အခြိနျပေးရငျး ဘာတှေ ခကျြကြှေးဖွဈကွလဲ⁉️အဆာပွေ လှ...
ပိတျရကျတှမှော မိသားစုကို အခြိနျပေးရငျး ဘာတှေ ခကျြကြှေးဖွဈကွလဲ⁉️
အဆာပွေ လှယျကူတာလေးတှပေဲ ခကျြမလား🤔
မိသားစုလိုကျ ဟော့ပေါ့ပဲ လုပျစားမလား🤔
ပါရမီကတော့ မီးဖိုခြောငျထဲမှာ နရောယူပွီး ကူညီပေးဖို့ အသငျ့ပါပဲနျော🥰
ပါရမီ ရှိရင် ဟင်းချက်ဖို့တော့ စိတ်မပူနဲ့နော် . နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ ၊ နေ့ညအချ...
ပါရမီ ရှိရင် ဟင်းချက်ဖို့တော့ စိတ်မပူနဲ့နော်
နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ ၊ နေ့ညအချိန်မရွေး အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ ချက်ပြုတ်ဖို့ ပါရမီရှိမှ ဖြစ်မှာပေါ့
ပါရမီ Gas ကိုမှာယူဖို့ ဖုန်း - ၈၄၈၄ ကိုဆက်လိုက်ပါ
ပါရမီ ရှိရငျ ဟငျးခကျြဖို့တော့ စိတျမပူနဲ့နေ
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ မိမိစားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေက အန္တရာယ်ကင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်...
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ မိမိစားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေက အန္တရာယ်ကင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘေးကင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ ချက်ဖို့အတွက် ဘေးကင်းတဲ့ ဂက်စ်အိုးလေးလဲ ရှိနေမှ ဖြစ်မှာပါနော်
ပါရမီ Gas က Double safety ပါတဲ့အန္တရာယ်ကင်းအသစ်စက်စက် ဖြစ်တဲ့အပြင်
စတိုင် နဲ့ စမတ်ကျကျ ချက်ပြုတ်ကြည့်စို့...👩‍🍳 . Parami Gas နဲ့ဆိုရင် ဘယ်အခ...
စတိုင် နဲ့ စမတ်ကျကျ ချက်ပြုတ်ကြည့်စို့...👩‍🍳
Parami Gas နဲ့ဆိုရင် ဘယ်အချိန်ပဲ ပြေးချက်ချက် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အကောင်းဆုံး နဲ့ အရသာ အရှိဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်လို့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းကောင်းလေးပါနော် 😍
💢 နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့ ‌သောကြာနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ . 🙏 ဥပုသ်နေ့တွင် ဘ...
💢 နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့ ‌သောကြာနေ့သည် ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
🙏 ဥပုသ်နေ့တွင် ဘုရားအမှုးရှိသော သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကပ်လှူရန် အတွက်
♨️ပါရမီ ဖြင့် ဆွမ်းချက်ရန် စောစောထတော်မူကြပါတော့.....
📣 ဘွန္တော... သပ္ပုရိသ အပေါင်း သူတော်ကောင်း... တို့..
ခဈြရတဲ့မိသားစုအတှကျဘေးကငျးပွီးစိတျခရြတဲ့ ရှေးခယျြမှု ကတော့ ပါရမီဂတျဈအိုးလ...
ခဈြရတဲ့မိသားစုအတှကျဘေးကငျးပွီးစိတျခရြတဲ့ ရှေးခယျြမှု ကတော့ ပါရမီဂတျဈအိုးလေးပဲပေါ့ 👍
ပါရမီဂတျဈအိုးလေးဟာဆိုရငျ ထိုငျးနိုငျငံကနတေငျသှငျးထားပွီးအရောအနှောကငျးတဲ့ဂတျဈဖွဈပါတယျ 🧡
ပါရမီဂတျဈအိုးလေးမှာ Safety Valve လေးပါသလို Regulator မှာလညျး Safety Valv
မိသားစုဝင်များတဲ့သူတွေအတွက် 12.5 Kg (7ပိသာခွဲ) Gas အိုးနဲ့ချက်နော် . ပါရမီ ...
မိသားစုဝင်များတဲ့သူတွေအတွက် 12.5 Kg (7ပိသာခွဲ) Gas အိုးနဲ့ချက်နော်
ပါရမီ Gas အိုးက နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေနဲ့အညီ Safety ပိုင်းကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ မိသားစုတိုင်းအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ မီးဖိုဆောင် ဖြစ်စေမှာပါ။
ပေါင်းတည်မြို့က မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customer များအတွက် ကြာနီကန်အုပ်စု ၊ ရှားေ...
ပေါင်းတည်မြို့က မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customer များအတွက်
ကြာနီကန်အုပ်စု ၊ ရှားပေါင်ရွာ၊ပေါင်းတည်မြို့ရဲ့
Future Light ပါရမီဂက်စ် အရောင်းဆိုင်မှာ ဝယ်ယူလို့ရနေပြီပါပြီ
မိသားစုကို ရှယ်ချက်ကျွေးကြမယ့် လူကြီးမင်းတို့အတွက်
နေပူပူ၊ မိုးရွာရွာ အချိန်မရွေး လွယ်လွယ်ကူ